Inona no hatao aorian'ny fametrahana Deepin 15.4 | Avy amin'ny Linux
Ny valin'ny fitsapana Linux Deepin 15.4 Izany dia mihoatra ny mahafa-po, distro miaraka amin'ny bika aman'endrika tena tsara, miaraka amin'ny fampisehoana azo ekena ary miaraka amina fampiharana isan-karazany mahomby napetraka ao amin'ny toerana misy anao. Ankehitriny, na dia eo aza ny zava-misy fa ny distro dia vonona ny hampiasain'ny mpampiasa rehetra, afaka manatsara hatrany ny fanatsarana isika aorian'ny fametrahana Deepin 15.4 ho hitantsika eo io.
1 Inona no vaovao ao amin'ny Deepin 15.4?
2 Ny fiheverana sasantsasany tokony horaisina alohan'ny hanombohana ny torolàlana
3 Dingana tokony hatao aorian'ny fametrahana Deepin 15.4
3.1 Ampivoary ny repositories deepin amin'ireo izay ekena indrindra ho an'ny toerana misy anao.
3.1.1 Ampivoary ny rafitra sy ny tahiry:
3.1.2 Mametraha mpamily fananana:
3.1.3 Mametraka Synaptic
3.1.4 Ovao ny fiteny ho wps
3.1.5 Mametraha endrits fikandrana:
3.1.6 Araraoty tsara ny fivarotana lalina
Inona no vaovao ao amin'ny Deepin 15.4?
Izaho manokana dia mandinika Deepin iray amin'ireo distro sinoa tsara indrindra hitako nandritra ny fotoana ela, satria izy no manana endrika hita maso tsara indrindra androany fa mahay mifangaro amin'ny zava-bita tsara sy rindrambaiko nohavaozina. Toy izany koa, ny distro dia miaraka amin'ny ivon-toerana fanaraha-maso mandroso izay hamela antsika hamaritra sy hametraka ny distro amin'ny safidintsika.
Ny ekipan'ny fampandrosoana deepin dia nitandrina ny antsipiriany rehetra tamin'ity distro vaovao ity, avy amin'ny sehatr'asa fametrahana azy izay misy detection marani-tsaina, scanner QR code ary hafatra momba ny distro. Toy izany koa, nampiany ny kernel Linux 4.9.8 tamin'ity distro ity mba hananan'izy ireo fanohanana mihamitombo kokoa.
Ny birao deepin 15.4 dia tsara be, miaraka amin'ny kisary fidirana haingana, baraingo azo ampifanarahana, menio fanamboarana mandroso, ankoatra ireo fiasa hafa.
Manoro hevitra anao aho hahita ny sasany amin'ireto fanadihadihana lalina manaraka ireto izay an-tsipiriany ny toetrany sy ny hatsaran'ity distro ity.
Ny fiheverana sasantsasany tokony horaisina alohan'ny hanombohana ny torolàlana
Deepin 15.4 Izy io dia distro miorina amin'ny debian miaraka amin'ny birao manokana, noho izany ny ankamaroan'ny rindranasa, torolàlana ary torolàlana natao sy novolavolaina ho an'ity asa distro ity any deepin.
Miankina amin'ny fitaovanao, mety tsy mandeha amin'ny laoniny ny sasany amin'ireo fampandehanana lalina, raha izany dia atoroy azy azafady.
Ireo tolo-kevitra natoronay etsy ambany dia tsy maintsy tanterahina amin'ny andraikitrao manokana, izany dia vokatry ny zavatra niainanay sy ny famakian'ireo manam-pahaizana isan-karazany.
Dingana tokony hatao aorian'ny fametrahana Deepin 15.4
Ampivoary ny repositories deepin amin'ireo izay ekena indrindra ho an'ny toerana misy anao.
Ity dia dingana iray heveriko fa ilaina aorian'ny fametrahana deepin satria ny repositories izay ampandehanana default dia miadana loatra ho an'ny ankamaroan'ny firenena any ivelan'ny kaontinanta Azia, azonao atao ny manandrana manova ny iray amin'ireo tahiry hita ao amin'ny lisitra izay Deepin dia manome antsika ny safidy fanavaozana (omeko ny iray avy any Brezila), fa i elav koa dia nizara lisitr'ireo solosaina solosaina azonao ampiasaina ary zaraiko eto ambany
Mba hampidirana ireo tahiry ireo dia tsy maintsy manitsy ireo loharanom-baovao.list izahay mba hanatanterahana izany, manaova ity baiko manaraka ity: sudo nano /etc/apt/sources.list
America: Etazonia, Mexico, Repoblika Dominikanina, Puerto Rico, sns.
deb ftp://mirror.jmu.edu/pub/deepin/ contrib lehibe tsy azo antoka deb ftp://ftp.gtlib.gatech.edu/pub/deepin/ deba main debp tsy azo antoka ftp: // fitaratra .nexcess.net / deepin / tsy mitombina contrib lehibe tsy maimaim-poana
Espana sy Eropa:
deb ftp://deepin.ipacct.com/deepin/ deba main tsy azo antoka deb ftp://mirror.bytemark.co.uk/linuxdeepin/deepin/ deba main debat tsy azo antoka ftp: //mirror.inode .at / deepin / tsy mitombina contrib lehibe tsy andoavam-bola
deb ftp://mirror.bytemark.co.uk/linuxdeepin/deepin/ contrib lehibe tsy azo antoka deb ftp://ftp.mirrorservice.org/site/packages.linuxdeepin.com/deepin/ tsy mitombina contrib lehibe tsy maimaim-poana
deb ftp://ftp.gwdg.de/pub/linux/linuxdeepin/ contrab lehibe tsy azo antoka deb ftp://mirror2.tuxinator.org/deepin/ deba main tsy azo antoka ftp ftp: //ftp.fau .de / deepin / tsy mitombina contrib lehibe tsy andoavam-bola
Ampivoary ny rafitra sy ny tahiry:
Andao atao izao manaraka izao ny baiko avy amin'ny terminal:
Azonao atao ihany koa ny manao azy amin'ny interface interface, amin'ny safidio fanavaozana ny rafitra. Azonao atao ny manararaotra sy mankato ny fikarohana fanavaozana mandeha ho azy.
Mametraha mpamily fananana:
Matetika isika dia mila ny mpamily tompony mba hiasa tsara kokoa ny solosainantsika, amin'izay dia azontsika apetraka toy izao manaraka izao, noho izany dia manokatra tsotra izao ny rindranasan'ny mpamily mpamily izay napetrakay lalina ho lalindalina isika, ampidiro ny tenimiafintsika ary safidio ireo mpamily misy ho an'ny solosaintsika.
Na dia mora ampiasaina aza ny tsena Deepin ary manana rindranasa marobe, heveriko fa ny synaptic dia toerana fitahirizam-bokatra feno kokoa noho izany apetrako ny fametrahana azy, noho izany dia ampy ny mampidina ny kinova 32 potika o 64 potika mifanaraka amin'ny maritranoorizanao ary apetaho amin'ny fampiasana gdebi, na mpitantana fonosana hafa.
Ovao ny fiteny ho wps
Ny fonosana ao amin'ny birao izay entin'ny deepin dia ny wps, tsy maintsy ovaintsika amin'ny teny Espaniôla ny fiteny mba hanaiky ny endri-tsoratra rehetra amin'ny fitenintsika ary hiasa tsara ny mpanitsy.
Mba hanaovana izany dia sokafy fotsiny ny wps ary mankanesa any amin'ny tontonana havia ambony izay ahitanao safidy iray milaza ny fiteny miova (fiteny mifamadika), dia hitady ilay fiteny (na fitenim-paritra) tadiavinay izahay ary hanaiky azy, ny fonosana mifandraika amin'izany dia alaina ary hiova ny fiteny.
Mametraha endrits fikandrana:
Azontsika atao ny mametraka ny fonosan'ny windows miaraka amin'ity baiko manaraka ity
sudo apt-mahazo mametraka ttf-mscorefonts-installer ttf-bitstream-vera ttf-dejavu ttf-fanafahana ttf-free font
Araraoty tsara ny fivarotana lalina
Zavatra iray manana lalina dia fivarotana tena tsara, tsara tarehy, voalamina, haingana, miaraka amina fampiharana marobe ary miaraka amina fametrahana tsotra, ny tolo-kevitro manokana dia ny hahazoantsika tombony betsaka amin'ity magazay ity, mitady ireo rindranasa izay tsy fantatsika, andrana na apetraka. ny fampiharana efa be mpampiasa indrindra.
Amin'ireto fanovana kely ireto dia hanana fanamorana lalindalina kokoa isika, raha manomboka manova zavatra hafa isika, dia misy zavatra mamokatra kokoa hivoaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Inona no hatao aorian'ny fametrahana Deepin 15.4
Tena tsara, tena tsara !!
Salama Manana olana tsy vitako ny namaha azy tao amin'ny Deepin 15.4, dia ilay horonantsary noviraviraina, manana sary intel tafiditra aho, antenaina fa misy afaka manampy ahy, misaotra anao.
Manana olana mitovy amiko aho fa tsy afaka namaha azy
Tutorial tena tsara dia ilaina ho an'ireo vao tonga amin'ny distro, saingy tsy maintsy manazava zavatra ho anao aho ary izany dia hoe tafiditra ao amin'ny magazay lalina i Synaptic, azonao atao ny mitady azy ary mametraka azy avy eo. Betsaka koa ireo rindranasa izay tsy hitan'ny synaptic fotsiny.
Ny fanavaozana ireo trano fitahirizana dia tsy voatery ho sarotra toa ny ataon'izy ireo amin'ny terminal, ity ny vahaolana mora indrindra
farany mamela aho mamela video manazava amin'ny fomba tsara indrindra, inona no hatao aorian'ny fametrahana deepin?
ary ny famerenana amin'ny fomba ofisialy ny lalina 15.4
Misaotra anao niara-niasa tamin'ity fizarana sinoa ity, avy amin'ny OpenSUSE 42.2 (KDE sy kanelina) aho izay namela ahy satria miadana be izy ary tsy sarotra. Amin'izao fotoana izao, ny fametrahana an'i Deepin fotsiny dia tsara fa mba hisorohana azy tsy hivoaka rehefa mampiasa "sudo apt-get update && apt-get upgrade":
E: Tsy afaka nanokatra fisie lock "/ var / lib / dpkg / lock" - misokatra (13: Nolavina ny fahazoan-dàlana)
E: Tsy afaka nanidy ny lahatahiry admin (/ var / lib / dpkg /), superuser ve ianao?
Nampiasako: "sudo su" mametraka ny teny miafiko ary manoratra hoe: "apt-get update && apt-get upgrade" ary avy hatrany dia manomboka ny fanavaozana, mazava ho azy fa nandeha tany amin'ny Control Center (zoro ambany avaratra) aho ary avy teo tao amin'ny "Update / Fampivoarana fanavaozana »Nanova ny fitaratra ho an'ny haingana indrindra ho an'ny faritra misy ahy aho.
Ary aorian'ny fametrahana ny loharanom-bola ilaina dia tokony apetrakao: sudo fc-cache
Tsy manam-pahaizana aho fa te hahafantatra ny GNU / Linux fotsiny aho ary tiako foana ny KDE, nianarako ny zava-drehetra tamin'ny lahatsoratra sy fampianarana toa anao.
uzanto dia hoy izy:
Mila mamaritra manokana ny sudo ianao ary ny apt-get dia tsy ilaina amin'ny apt koa. "Sudo apt update && sudo apt upgrade"
Valio amin'i uzanto
sodina dia hoy izy:
Salama, tutorial tena tsara, manana olana aho, mametraka deepin aho saingy tsy mamela ahy hitahiry na hamafa ny disks na partitions, mametraka hidin-trano amin'ireo tsirairay ireo ary tsy haiko ny famahana io olana io, miandry valiny aho ary manomboka izao, misaotra anao . mahafaly
Mamaly an'i pipo
Darwins torres dia hoy izy:
Tsara ny tolakandro, andramo ny fanesorana ny safidy fanombohana haingana ao amin'ny safidin'ny herinaratra windows, avereno ao anaty lalina sy voila
Valiny tamin'i Darwins Torres
Carlos Luciano Figueroa dia hoy izy:
Salama manao ahoana ianao, manana kahie cx misy ram misy i7 16gb sy karatra sary intel hd miampy iray hafa avy amin'ny nvidia 940mx. Tiako i Deepin 15.4 saingy tsy afaka mamaha ny olan'ny fanavaozana amin'ny alàlan'ny GUI aho. Isaky ny mangataka ny hamerenana ny fanavaozana izy dia ataoko fa manome fotoana kely 0% ary manome lesoka, na eo aza ny fanandramana dia mitohy amin'ny zavatra mitovy ihany. Nanavao tamin'ny alàlan'ny terminal aho. Miseho amin'ny farany ny msg: 0 nohavaozina, 0 vaovao hapetraka, 0 esorina ary 52 tsy nohavaozina. Ity lesoka ity ihany dia toa tsy mamela ahy hisintona sy hametraka rindranasa hafa avy amin'ny magazay, satria manome lesoka ihany koa izy ireo. Ny repositories dia avy amin'ny fireneko ary miasa amin'ny hafainganam-pandehan'ny 20mb mahazatra aho. Ahoana no fomba hamahako an'io olana io? Izaho dia nitady sy nitady vaovao momba an'io fa vaovao amin'ny Linux aho ary ny zavatra rehetra dia avo roa heny noho ny vidiny. Voalohany indrindra, misaotra betsaka tamin'ny anjara birikinao sy ny fotoana laninao. Mihobia!
Valiny tamin'i Carlos Luciano Figueroa
Araho ny dingana hanovana ny toeram-pivarotana ofisialin'i Beijing ho an'ny iray akaikin'ny firenenao
Marcelo orlando dia hoy izy:
Ankoatry ny fanaovana izay lazain'i Darwin Torres dia mora kokoa ny mametraka apt-fast (Mitaky ny fametrahana aria2). Raha hitanao fa sarotra loatra ny mametraka izany rehetra izany eo amin'ny terminal, azonao atao ny misintona ny .deb an'ny prozilla sy apt-proz (Na dia somary miadana aza izy io). Ity rindrambaiko ity dia ahafahanao manafaingana ny isan'ny fifandraisana, manao izay haingana kokoa amin'ny fampidinana.
PS: Raha manapa-kevitra ny hametraka apt-haingana ianao dia tsy maintsy mampiasa ilay boky handefasana azy amin'ny Debian fa tsy Ubuntu.
Valiny tamin'i Marcelo Orlando
Borola dia hoy izy:
Tsara ny bilaoginao saingy manantena aho fa hampahafantarinao ahy ny fomba fanavaozana ny toerana anaovana deepos application satria sudo add-apt-repository ppa: tsy mandeha izy ireo na tsy manavao.
Valiny tamin'i Borola
Ao amin'ny fanaingoana, ao amin'ny fizarana fanavaozana, misy lisitr'ireo fitaratra izay ahafahanao misafidy iray izay akaiky ny firenenao
Deepin dia tsy mifanaraka amin'ny ppa satria mifototra amin'ny Debian fa tsy Ubuntu. Saingy azonao atao ny mametraka ireo fonosana ireo amin'ny "Aptik", azonao jerena ao amin'ny magazay Deepin, ao amin'ilay famaritana milaza fa mamela anao hametraka fonosana rindrambaiko toy ny ppa ianao.
Ie, nanandrana aho fa tsy nisintona 🙁
Valiny tamin'i Dan
Salama, tutorial tsara. Ny fangatahana ao amin'ny deep 15.4 tsy manana ny baiko DEB napetraka. Ahoana no hametrahako azy ???
raha te hitantana rakitra .DEB dia tsy maintsy mametraka gdebi ianao
Roge dia hoy izy:
Miala tsiny fa manana olana aho, mametraka deepin 15.4, manavao ny zava-drehetra aho, fa rehefa maty izy io dia nesorina ny dock sy ny launcher ary tsy afaka namboatra azy aho dia mila fanampiana.
Valio i Roge
Ahoana ny fomba hamoronana sary GIF amin'ny Linux avy amin'ny console